Na-emechi mgbe niile: 10 Statistics Driving Sales Change | Martech Zone
Na-emechi mgbe niile: 10 Statistics Driving Sales Change
Sunday, May 29, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ndị otu nọ na Microsoft etinyela akwụkwọ ọcha dị egwu banyere ihe ịma aka na ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ ahịa, nrụpụta ọrụ ha, na ike ịmegharị na ịnabata teknụzụ. Anyị na-ahụkarị ụlọ ọrụ na-ebute ọrịre ahịa dị egwu site n'okwu ọnụ na ọkpụkpọ oyi. Anaghị m enwe obi abụọ ọ bụla na atụmatụ ndị a na - arụ ọrụ - n'ezie ha na - arụ ọrụ.
Usoro ahia maka ọtụtụ ụlọ ọrụ agbanwebeghị n'ime afọ iri. Nke a jọgburu onwe ya, n'ihi na ihe na-agbanwe bụ njem onye na-azụ ahịa na otu ndị ahịa na azụmaahịa na-enyocha mkpebi ịzụ ahịa ọzọ ha si abịa. Ọbụna mgbe azụmahịa nwetara nnabata dị ukwuu sitere n'aka onye òtù ọlụlụ ma ọ bụ onye ahịa, atụmanya ahụ na-enyocha ụlọ ọrụ gị na ikike gị n'ịntanetị. Ajụjụ bụ Kedu ka ụlọ ọrụ gị gosipụtara nke ọma ebe ha na-achọ?
Ndị na-ere ahịa siri ike anaghị eme ihe ha na-eme kwa ụbọchị nke ọma rely ha na-adabere na ọrụ mkpokọta n'ụzọ ndị na-agaghị ekwe omume afọ ole na ole gara aga. Harvard Business Review.
Akwụkwọ akụkọ Microsoft, Na-emechi Mgbe niile: ABC nke Ahịa na Oge Oge A, bụ ezigbo akụ maka ijegharị nzukọ gị site na mgbanwe, yana ndụmọdụ sitere na akụ dị egwu dị ka enyi m Jason Miller si LinkedIn na iri na abuo ndi okacha amara ndi ozo na-acho ire ahia gi n’ile ikuku kar ia agha ya.
Ndị a bụ ọnụọgụ ọnụọgụ 10 sitere na akwụkwọ akụkọ na-enye ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ, n'ofe akụrụngwa, na ịkwesịrị iji teknụzụ ma ọ bụrụ na ị nwere olile anya ịkwalite na ịbawanye arụmọrụ nke ahịa gị.
Dabere na Nrụpụta Ọrụ, Ndị na-ere ahịa ahịa na-eji naanị 22% nke izu ha ere n'ezie. A Mkpebi Sirius kpughere na 65% nke ụlọ ọrụ 'reps reps na-etinye ọtụtụ awa na-abụghị ere ihe omume, gụnyere-egwu ala elu akụ na ịkwa akwa ngosi ihe.
Dabere na SBI, ndị na-azụ ahịa bụ 57% nke ụzọ site na ịzụrụ usoro tupu ha akpọtụrụ ahịa. Maka ịzụrụ ihe dị mgbagwoju anya, ọnụ ọgụgụ a gbagoro na 70%.
Dị ka otu IBM mmasị mmasị, oku oyi na-adị naanị 3% dị irè.
Iji LinkedIn Inmail, ndị nnata nwere ike ịzaghachi ndị ahụ ọbịbịa 67% nke oge
Dabere na Ọhụụ ụlọ ọrụ, 74% nke ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ụlọ ọrụ bụ nke mbụ iji tinye uru
79% nke ndị na-ere ahịa na-enweta oke ejiri usoro azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Naanị 15% nke ndị na-ejighi ire ere mmekọrịta mmadụ nwetara nwetara, SBI.
Sellingre ahịa mmadụ bụ ụzọ # 1 maka ndị na-ere ahịa iji wepụta ụzọ nke ha, dị ka SBI.
Dabere na Microsoft, nghọta data dị mkpa na atụmanya nwere ike belata oge ejiri mee nchọpụta tupu ịkpọ oku site na 70%.
The Miller Heiman Ahịa Omume Kacha Mma chọpụtara na 91% nke òtù klas ụwa na-emekọrịta na ngalaba niile iji mechie nnukwu azụmahịa, ebe naanị 53% nke nzukọ niile gbakọtara na nnukwu azụmahịa.
Lọ ọrụ ndị na-eji netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta hụrụ na nrụpụta azụmaahịa na-ebili dị ka 30%, dịka Klọ ọrụ McKinsey Global Institute.
Nkuchi bu isi ihe. Nnukwu ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-achọ ngwaọrụ na ọrụ ndị na-enyere ndị nnọchi anya ha ire ngwa ngwa na nnukwu njikọ. Organizationstù ahia ndị na-agba mgba na-emejuputa ihe ngwọta na-eme ka usoro na nrụpụta ọrụ nke ndị otu ha belata.
Companieslọ ọrụ na-aga n'ihu na-agbanwe usoro azụmahịa iji gbanwee ụdị ọrụ ọhụụ nke ngwaọrụ mkpanaka, ngwaọrụ ndị mmekọ yana teknụzụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Avanade.
Lezie anya maka usoro ihe omuma, akwukwo ocha na ahia nke na abia, anyi gha enye ndi mmadu ahia. Nke a bụ nnukwu ọdịiche na ụlọ ọrụ nke anyị kpebiri ịmeju. Anyị kekọtara ọnụ ọkachamara, ndị na-elekọta mmadụ na ndị na-ahụ maka ọdịnaya na ndị isi ahịa iji nye usoro egosipụtara maka ịre ahịa mmadụ. Ka ọ dị ugbu a, gbaa mbọ ibudata akwụkwọ ọcha a ma lelee ihe Microsoft Dynamics ga-enye.
Na-emechi Mgbe niile: ABC nke Ahịa na Oge Oge A
Tags: na-ere mgbe niileavanadeụlọ ọrụ ọhụụIBMJason millerLinkedInnjikọ emailmKKsey uwamicrosoftmiller heimanarụ ọrụ ngwa ngwaahịa osoosobenchmarkerNkwado ire ahịaomume omume ọmụmụarụpụtaghị ahịaSBIn'ireere nkwadoere ọgụgụ isiere teknụzụmkpebi siriusna-elekọta mmadụ na-ere
Nkọwapụta ọnụọgụ nke Mmetụta Ahụmịhe Ndị A Na-eji Agagharị